London. Guta rakasarudzika kuona, kuverenga uye kuda | Zvazvino Zvinyorwa
London. Guta rakasarudzika kuona, kuverenga uye kuda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel, Nhetembo, Nyaya, Theater, Zvinotyisa
London. Westminster Bridge uye Southbank Book Musika. 1995-2012-2015
Chiremba Samuel Johnson (1709-1784) akataura izvozvo uyo akaneta neLondon, akaneta nehupenyu. Asi mumwe mudetembi mukuru wechiRungu, Percy Bysshe Shelley (1792-1822), akanyora izvozvo gehena iguta rakafanana nelondon. Ini, ndiani chete ini, ndinoti pese pandinenge ndatsika kuLondon zvakapusa Ndave ndichifara. Zvese semushanyi wechigumi negumi nekugara imomo pandakaita kwechinguva.
Nhoroondo yayo, nharaunda dzayo, hwema hwayo, makona ayo zviuru vanokutungamira kuti utangezve imwe chiuru nyaya dzakadai. Uye ivo zvakare vanokurudzira iwe kuti ugadzire ivo. Iyo Westminster Bridge yakaona kubwinya nenjodzi dzakadai. Uye iwo musika webhuku unozivikanwa paSouthbank, uine mazana emazita epasirese uye emuno mazita. Nhasi ndoda kutaura mamwe mabhuku nezveguta rino uye kokai munhu wese kuti ashanyire kana kudzoka. Hapasisina zvikonzero. Zviri London.
Zvaizova zvisingaite kuita rondedzero yenyaya dzakawanda nyaya dzakakurudzirwa neLondon kana dzinoitika mairi. Makuru mazita mumabhuku, epakati nepadiki. Vasingazivikanwe kana vanyori veamateur kuti tinowana izwi, chirevo kana mufananidzo. Pasina kana kuziva guta.
Nekuti ndiani asina kutamba muhoro dzemapati aya akapinda hanzvadzi dzaDashwood en Kunzwisisa uye Kunzwisisa? Ndiani asina kuona kana kufungidzira London yaDickens? Ndiani asina kushanyira kumakuva e Highgate uye haana kutenda kuti aigona kuona mumvuri we Lucy westenra?
2 Anopinza - Stephen Leather
3 Nhau dzeLondon - Doris Kudzidza
4 Murume weLondon - Georges Simenon
5 Nhau dzeLondon - Enric González
Pamwe musoro wacho chinonyanya kuzivikanwa (uye yakakura) kunyudza guta iri kubva kune yako foundation mune diki diki yeCeltic kusvika kumabhomba e Hondo Yenyika Yechipiri, vachipinda nekupinda kwemauto e César muna 54 BC, Hondo dzehondo, iyo normans, kusikwa kwe gurobhu, iyo yemitambo iyo Shakespeare yaizotangisa mitambo yake, iyo makakatanwa ezvitendero, the Moto mukuru kubva 1666, iyo Victorian era ... Lots of nyaya dzinosanganisa vatambi chaivo uye vekunyepedzera, ayo ari mashoma mhuri sagas izvo zvinopfuurira kuburikidza nemazana emakore.
Anopinza - Stephen Leather
La yekutanga novel kubva kumumiririri akateedzana Dhani mufudzi, inozivikanwawo seSpider. Stephen Chikopa inogadzirisazve iyo yakaoma uye yakasviba mhepo yeLondon pasi uye inoisa Mufudzi mumutambo uzere nemisungo iyo inochengeta fungidziro ichienda kusvika kumagumo.
Nhau dzeLondon - Doris Kudzidza
Munyori weBritish, mubairo Mubairo weNobel muMabhuku makore gumi apfuura, akaenda kuLondon ine mhirizhonga, motley uye nemarudzi mazhinji ezana ramakore rechimakumi maviri ekupedzisira kunogadza nyaya gumi nesere izvo zvinoumba iyi vhoriyamu yenyaya.
Kudzidza kwakabata pane imwe yematimu ake aanofarira: iyo mufananidzo wakakomba wechiChirungu bourgeoisie. Idzi nyaya dzinorondedzera kuoma, zvinoitika uye zvakawanda zvinoshamisa kuti hukama hwemhuri uye hukama hwehukama hune, nekukosha kweBritish kwekokorodzano senge kumashure.
Murume weLondon - Georges Simenon
Simenon akanyora Murume weLondon muna 1933, zita rake rekutanga raionekwa serakakomba mushure memanyowani akakurumbira aive amupa kubudirira zvakanyanya kusvika ipapo.
Humwe husiku hwechando, muchiteshi cheFrance cheDieppe, chinja njanji, louis maloin tarisa kusvika kwechikepe. Asi ipapo anozoona chiitiko chinomupidigisa pasi: murume anowira mumvura achimbundira sutukesi uku mhondi yake ichitiza murima. Maloin anozofunga kupinza mumvura dzechiteshi uye kutora sutukesi. Kuda kuziva kunomukunda uye ... zvirimo musutukesi zvinotora mweya wake. Zvinhu zvichawedzera kuoma kana mushure memazuva mashoma awana kuvepo kwemhondi.
Nhau dzeLondon - Enric González
Enrique Gonzalez, mutori wenhau aive mutori wenhau kuLondon Nyika, anotidzosera ake zviitiko, nyaya uye vatambi panguva yacho yaivapo. Chinyorwa chaicho uye chinonakidza.
Izvo hazvina basa nemusoro, iyo nguva kana nyaya. Chero chii zvacho ngaave neshoko London yakadhindwa inokodzera cherechedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » London. Guta rakasarudzika kuona, kuverenga uye kuda
Thomas Phillipps uye wake rudo-obsession yemabhuku